Alaabada-Soo-kabashada oo Lagu Sooceliyay Webiga Weyn Shenandoah - Ellicott Dredges
Qiime-La-soo-Bixiye ay soo heleen Qaybta Nidaamka Ka-qaadista Sediment wuxuu kordhiyaa ilaalinta Wabiga Shenandoah
Source: Ka shaqeynta Kiimikada
Badbaadinta Wabiga Shenandoah iyo dib u soo celinta zinc hydroxide qiimo leh waxaa labadaba ku guuleystey Avtex Fibers, oo ah soo saaraha ugu weyn ee qaranka ee fiilooyinka, iyada oo loo marayo isticmaalka qalabka wax lagu gooyo ee la geyn karo.
Muddo sanado ah, Avtex wuxuu ku shubay zinc hydroxide, oo ah wax soo saar ka mid ah geedi socodkooda wax soo saar, si loo dejiyo balli ku wareegsan geedka. Balliyada dejinta ee kuyaala geedka Avtex's Front Royal ee Virginia waxay si lama filaan ah u bilaabeen inay ka buuxsamaan dhoobada iyo jiifka - faaruq qiimo badan - maadaama la go'aamiyay in haddii zinc hydroxide dib loo soo celin karo lagu baaraandegi karo zinc sulfate waxtar leh.
Ka dib markii la baaray habab kala duwan si zinc looga soo ceshado balliyada, Avtex wuxuu go aansaday nidaamka saarida ceelka la qaadi karo oo nadiifin kara balliyada dejiya wershadaha halka balliyadu ku sii jiraan adeega. Iyada oo in ka badan 85 hektar oo zinc hydroxide ah oo ku yaal toddobada balli, mashiinka loo wareejintiisa ayaa ahayd mid lama huraan ah.
Qalabka, oo dhaqaajiya isaga oo isku dhejiyaya fiilo ku tiirsan xeebta, waxay ku shaqeyn kartaa biyaha illaa iyo qotodheer sida inji ee 21 inji. Dhoobo gaar ah ayaa ku wareegsan madaxa gogosha, maroojinta sheyga la hakiyey iyo yareynta ciladaha.
Xakameynta ugu weyn ee weelasha ka saarida waxaa si habsami leh u shaqeynaya. Mashiinka toosan ee goonida loo taxaabay, oo lagu rakibay madaxa koboca, ayaa ku qalabeysan mindiyo go 'dhir ah oo kharibaya waxna ku jareyso wax u eg miisaska udgoonka. Mashiinka weyn ee kuyaala madaxa dusha sare ayaa alaabta geeya qalabka qaadashada bamgareenta. Waxay ka saartaa fadhiga sagaal cagood oo ballaadhan oo loo jaray illaa iyo toban iyo toban dhudhun. Dhinacyada harooyinka harooyinka ama harooyinka dejinta ayaa lagu dejin karaa iyadoo loo leexiyo xagal dahaarka bidix iyo midig ilaa xagal darajo 45.
Waxaa ku shaqeeya mashiinka dhimirka ee 175 faras xoog leh oo muqaddas ah, mashiinka mashiinka xNUMX rodol ee 19,000 wuxuu si caadi ah u cunaa qaabkiisa adag.
Wejiga koowaad ee hawlgalka oo ku saabsan dib-u-soo-celinta, makiinadaha la qaadan karo ee miinada ah iyo wareejinta ayaa si qotodheer ugu urursan goobta Warshadda Soocelinta Zinc. Mashiinada waxay ku ridaan tuubadan xirmooyinka lugta ee 2000 mitirka 1600 gpm haanta weyn ee haysa. Haanta ka socota haanta waxaa lagu tuuraa kuleyliyaha. Qulqulka ayaa markaa lagu sifeeyaa miiraha weyn ee shaandhada ah si biyaha looga saaro. Keega haray ee ka socda saxaafada waxaa lagu walaaqay aashitada loo yaqaan 'sulfuric acid' si loo baabi'iyo zinc. Hawsha dheeriga ah ee keega xawaaraha ayaa waxay ka saartaa maadada birta iyo kaalshiyamka si loo sameeyo sheyga ugu dambeeya: xalka zinc sulfate.
Wejiga labaad ama wajiga xakamaynta wasakhowga ee dalabka, unugyada waxaa loo isticmaalay in lagu caawiyo ilaalinta wabiga Shenandoah. Waste Water at heerka qulqulka 6000-8000 galan daqiiqaddii, ama 8-12 milyan galan daqiiqaddii, ama 8-12 milyan gallons maalintii, 365 maalmood sanadkiiba, waxaa lagu farsameeyaa xarun daaweyn ballaaran oo ku taal Avtex Plant. Biyaha wasakhda ah ayaa marka hore la goyn karaa oo la caddeeyaa. Biyuhu waxay ka qulqulayaan labada sharrax u kala bixida laba weel oo biyo-dhaamin ah si loo xalliyo wixii walxaha cuno ee la hakiyey ee aan laga saarin caddeynta.
Qulqulka bulshda ku urursan sagxadaha wasaqda ayaa waxaa saara meyrarka wasaqda. Howlaha mashiinka waa muhiim halkaan, maxaa yeelay waxay ka saaraan qulqulka biyo mareenka iyagoon kicin waxyaabaha adag. Haddii cunnooyinka adkaha ah dib loo helo, waxay ku qulqulayaan warshadda daaweynta sare.
Natiijooyinka aadka u wanaagsan ee laga helay codsiyada kor ku xusan waxay Avtex u horseedeen inay qiimeeyaan nidaamka ka saarida wasakhda si loogu isticmaalo kale. Qeybta ayaa la tijaabinayaa iyada oo loo adeegsanayo in meesha looga saaro dambaska duusha oo laga dejiyo balliyada. Waqtigaan, balliyada waxaa laga soo saaraa adeegga wareegga iyadoo boodhkii duula lagu nadiifiyey iyadoo la isticmaalayo jiidista iyo xamuulka qashinka. Kaydinta la mahadnaqi karo waxay ka imaan doontaa codsi guul leh kiiskan.
Waxaa laga daabacay: Processing Kiimikada